Chii chinonzi Analytics? Analytics Technologies iyo Dhizaina Kushambadzira Sarudzo
Dzimwe nguva isu tinofanirwa kudzokera kune zvekutanga uye tinonyatsofunga nezve aya matekinoroji uye kuti vari kuzotibatsira sei. Analytics padanho rakanyanya kukosha izita rinobva mukugadziriswa kwenzvimbo kwe data. Takakurukura analytics mazwi Kwemakore ikozvino asi dzimwe nguva zvakanaka kuti udzokere kune zvekutanga.
Tsanangudzo yeKushambadzira Ongororo
Marketing analytics inosanganisira maitiro uye matekinoroji anoita kuti vashambadziri vaone kubudirira kwezviyero zvavo zvekushambadzira nekuyera mashandiro (semuenzaniso, kublogi maringe nevezvenhau maringe nechaidhi kutaurirana) vachishandisa zvakakosha bhizinesi metriki, senge ROI, kushambadzira chinongedzo uye kwese kushambadzira kushanda. Mune mamwe mazwi, inokuudza iwe kuti ako ekushambadzira zvirongwa ari kunyatso kuita. kuburikidza SAS
Chii chinonzi Analytics - Vhidhiyo kubva kuIBM
Sezvo iri yekutengesa pamhepo, Web Analytics mapuratifomu ndiwo masisitimu ayo unganidza, uunganidze uye ushume pane chiitiko chevashanyi kune yedu saiti saiti (s) kana kudyidzana kwenhau. Iko kune madiki e analytics kuti vatengesi vanofanirwa kuziva uye kushandisa nguva nenguva:
Maitiro Ekuongorora - nzira dzinotorwa nevashanyi uye mashandiro avanoita nepeji rega rega zvakakosha data kuti unzwisise kuti saiti yako ingakwidziridzwe sei mukuwedzera kubatanidzwa uye kutendeuka. Vanhu vakawandisa vanongogadzira saiti yakanaka uye vanokanganwa kuti iri gedhi rekuita bhizinesi. Iko kune toni yekushandisa sainzi uye ruzivo izvo zvinogona kushandiswa kuwedzera kukosha kwesaiti yako kubhizinesi rako.
Bhizinesi Njere - kana BI analytics isa zvese zvinoitwa nemasangano ako kuita, kubva kushambadziro kusvika pakuita uye accounting, kune vakuru hutungamiriri kuongorora maitiro ekambani. BI iri pakati nepakati, hombe uye emabhizinesi masangano 'maitiro ekuongorora uye kuronga.
Shanduko Ongororo - shanduko pane saiti chiitiko chekukosha. Izvo zviri pachena zvakanyanya kutenga pane ecommerce saiti. Nekudaro, kana yako saiti iri kusimudzira sevhisi, shanduko inogona kunge iri nhamba yevashanyi vanonyorera kuyedza kwemahara, demo, kurodha pasi, webinar kana chero chimwe chiitiko chakaratidzwa kuti chipe kukosha. Kutendeuka analytics kazhinji inosanganisa kuyedzwa kwezvinhu kuitira kuti iwe ugone kukwidzirisa saiti kuti ushandure vamwe vashanyi kuva vatengi.
Mutengi Intelligence Analytics - makambani mazhinji haanyatso tarisisa kuti vatengi vavo vanovada here kana kwete kana izvo zvinodzivirirwa munzira yekubatana kwakakwana. Masisitimu anotendera vatengi mutoro kuburikidza nemagariro chiteshi, ongororo uye zvimwe zvinongedzo zvekutora data zvinogona kupa tsvakiridzo yakakosha mukuonekwa kwekambani yako uye nezvaungaite kuti uvandudze.
Mutengi Lifecycle Analytics - kunzwisisa zvikamu zvemutengi wako zvakakosha kuti uwedzere kuchengetwa kwevatengi, kutyaira kumusoro kukosha kwevatengi, uyezve kuteedzera ramangwana rinotungamira maringe nekubudirira kwakanyanya kwauinako. Mashoma mapuratifomu anoyera masiteji pamwe needu ekushambadzira automation vanotsigira pa Right Pane Inopindirana, ita shuwa kuti utore demo rehurongwa hwavo.
Kutumira mameseji Analytics - kushambadzira otomatiki, e, inbox kubika, SMS, runhare, uye mamwe mameseji masystem anopa analytics kukupa iwe chiitiko cheumwe mushandirapamwe, chiitiko chekunyorera, uye kazhinji unobatana neimwe analytics masisitimu ekubatsira kusimudzira mameseji ako uye mushandirapamwe kuuraya.
Kufanotaura Ongororo - zvichibva pane zvekare zvaitika zvesaiti yako, aya mapuratifomu anofungidzira kuti hunhu hweramangwana revashanyi huchave chii. Kufanotaura analytics mapuratifomu anowanzo kupa mamodheru kwaunogona kugadzirisa uye kufanotaura kukanganisa kweshanduko pane mashandiro enzvimbo yako. Semuenzaniso, ko kana iwe ukacheka mubhadharo wako nekudzvanya muhafu uye ukawedzera yako infographic bhajeti?
Real-time Analytics - ipa nzwisiso yezvezvinoitwa zviitiko uye maitiro evashanyi pane yako saiti panguva ino yazvino. Yechokwadi-nguva analytics inogona kuiswa mukati kuti uchinje hunhu hwevashanyi, wedzera mukana wekushandurwa, uye nekupa kuziva kweminiti kusvika kuminiti yekupindura-nguva yako saiti.
Kutengesa Analytics - Kugonesa kugonesa chikamu chiri kukura chehunyanzvi. Sales dashibhodhi sevatsigiri vedu pa Salesvue sangana zvakananga neSalesforce CRM yako uye upe manejimendi ekutengesa nezvose zvavanoda kuti vaone uye vafungidzire mashandiro ekutengesa. Uye kune iye mutengesi, masisitimu aya anovabatsira kuti vawedzere kugadzirwa, kukwidziridzwa kwekubata, uye kuvhara madhiri makuru nekukurumidza.
Tsvaga Analytics - backlinks ndiyo yegoridhe chiyero chepamusoro paInternet uye chinzvimbo chinotyaira traffic uye shanduko. Nekuda kweizvozvo, zvishandiso zvinokubatsira kuongorora yako search engine keywords, vakwikwidzi, uye kuti zvemukati zvirimo sei inogona kukubatsira iwe kukwezva vashanyi vatsva uye nekuvaka zvemukati marongero anotyaira bhizinesi. Kutsvaga kwakabhadharwa analytics kukupa iwe nekiyi kiyi kuita uye kushandura metric kuti iwe ugone kutyaira pasi yako mutengo pamutungamiri uye kuwedzera kutengesa.
Zvemagariro Ongororo - seInternet zvave kusimukira, vanhu nemakambani vakavaka chiremera chinovaunganidzira ivo vanotevera kukura. Zvemagariro analytics Unogona kuyera iro chiremera, kuteedzera chinzvimbo chako munharaunda, kukubatsira kuti unzwisise kuti sei vanhu vachikutevera uye nemisoro ipi yavanoshamwaridzana newe zvakanyanya. Kukubatsira iwe kukura kunotevedzera zvemagariro uye chiremera kazhinji zvinotungamira mukuwedzera kuvimba pakati pevateereri vako kana nharaunda - iyo inogona kushandiswa kudzokorora kukwidziridzwa kwako kana kutotyaira kutendeuka kwakananga.
Ehezve, ese eaya masisitimu anogona kupa ruzivo kuwandisa uye kazhinji kutungamira ku kuongorora kuora mitezo. Zvakanaka kuona analytics mapuratifomu anovhura maAPIs avo uye kubatanidza mune mamwe mapato echitatu kugadzirisa otomatiki ruzivo rwevatengi. Kushoropodza kukuru kwangu analytics mapuratifomu ndeyekuti ivo vanounganidza uye vanotaura data, asi hazviwanzo kuita kurudziro. Mapuratifomu ekuyedza kutendeuka anoita izvi nemazvo - ndinoshuva dai zvimwe zvese zvaizoita! Semuenzaniso, ini handinzwisise kuti sei analytics mapuratifomu haape ruzivo pane zvemukati marongero uye anokupa iwe kurudziro pane izvo zvaunofanirwa kunge uchinyora nezvazvo.
Tags: hunhu analyticsbusiness intelligencekutendeuka analyticstsananguro ye analyticstsananguro yekutengesa analyticstsanangudzoemail analyticsgoogle analyticsanalytics anoshanda seikuti inoshanda seiIBMkushambadzira analyticsmameseji analyticsomniturepredictive analyticschaiyo nguva analyticssaiti analyticszvemagariro analyticsmagariro enhau analyticspadandemutande analyticswebhusaiti analyticszvideochii chinonzi analytics